Fitsapana COVID 'state of the art' vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Fitsapana COVID 'state of the art' vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon izao dia afaka manome ny mpandeha fiaramanidina toeram-pitsapana COVID manara-penitra eo an-toerana eo amin'ny seranam-piaramanidina rehefa manomboka manohy ny fandaharam-potoanan'ny sidina ary manana mpandeha maro hafa indray mandeha.
Misokatra ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool ny laboratoara fanandramana PCR vaovao.
Afaka manao fitsapana 500 isan'andro ny laboratoara vaovao.
Ny seranam-piaramanidina Liverpool no voalohany any UK manana toerana tsy manam-paharoa toy izany.
Orinasa misahana ny fahasalamana sy fitsapana anglisy Salutaris People - izay miasa amin'ny serivisy fitiliana PCR haingana ho an'ireo mpandeha fiaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon, miaraka amin'ny Test Assurance Group Ltd. laboratoara fanandramana COVID vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon.
Ny fotodrafitrasa manara-penitra dia miara-miasa amin'ny Source BioScience - mpamatsy asa iraisam-pirenena momba ny serivisy laboratoara ho an'ny mpanjifa amin'ny sehatry ny fanafody, fitsaboana, klinika, fikarohana momba ny siansa ary biopharma - ary Salutaris People miaraka amin'ny Test Assurance Group Ltd (TAG) dia manome fitsapana COVID sy PCR ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon.
Ny laboratoara vaovao dia natao hanatanterahana fitsapana 500 isan'andro nefa mora ampitomboina amin'ny ambaratonga mba hanamorana ny fitsapana 1000 sy mihoatra raha ilaina izany. Source BioScience dia ekena amin'ny fenitra ISO 15189: 2012 ary mpamatsy lisitra DHSC voatanisa COVID-19 ihany koa.
Ny serivisy natolotry ny TAG, Salutaris People, ary ny Source BioScience dia ahafahan'ny mpandeha fiaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon sy ireo manidina avy amin'ny hafa Seranam-piaramanidina UK miaraka amin'ny serivisy fitiliana Rapid Fit to Fly miaraka amina vanim-potoana fihodinana 3 ora, miaraka amin'ny serivisy fitiliana Fit 24 Fly mahazatra. Ny santionany koa dia nangonina teny an-toerana tao Liverpool ary namboarina tao amin'ny laboratoara lehibe Source Bioscience any Nottingham ahafahan'ny Andro 2, Andro 8, Fitsapana ny famotsorana ary serivisy fitiliana PCR COVID fitiliana ho an'ny mpanjifa.
Manome hevitra momba ireo fotodrafitrasa vaovao ao amin'ny Seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon, Talen'ny varotra Lucy O'Shaughnessy, nilaza hoe:
“Faly izahay fa tonga ny seranam-piaramanidina voalohany any Angletera manana toerana sy serivisy miavaka toy izany. Ny seranam-piaramanidina Liverpool John Lennon izao dia afaka manome ny mpandeha fiaramanidina sarobidy manana toeram-pitsapana COVID manara-penitra eto an-toerana eto amin'ny seranam-piaramanidina rehefa manomboka manohy ny fandaharam-potoanan'ny sidina isika ary manana mpandeha maro hafa indray mandeha. Ny seranam-piaramanidina dia manandrana manolotra serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika amin'ny fotoana rehetra. Miara-miasa amin'ny Test Assurance Group (TAG) / Salutaris People ary Source BioScience no ahafahantsika manolotra serivisy fitiliana PCR mety sy mahomby izay tantanan'ny mpiasan'ny fahasalamana azo itokisana. "
Ilay fotodrafitrasa vaovao - iray ihany amin'ny karazany ao amin'ny seranam-piaramanidina UK - dia iasan'ny mpiasa teknolojia laboratoara efatra ao anatin'izany ny mpanara-maso ny shift ary manana mpanadihady PCR miisa 8 eo an-toerana, mpikarakara ranon-javatra Bio Molecular Systems ary cycler termal hanolotra tena haingana- fomba PCR kualitatif fotoana hamantarana ny SARS-CoV-2.